नर्सिङ काउन्सिलको निर्वाचन : तीन सिट, आठ जना उम्मेद्धार, क-कस्ले बाजी मार्ला ? – Nepali Health
नर्सिङ काउन्सिलको निर्वाचन : तीन सिट, आठ जना उम्मेद्धार, क-कस्ले बाजी मार्ला ?
२०७६ भदौ २७ गते १८:५८ मा प्रकाशित
काठमाडौँ, २७ भदौ । नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा रिक्त तीन सदस्य पदका लागि भोलि (२८ भदौ)मा निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनका लागि ८ जनाले उम्मेद्धारी दिएका छन् ।
उम्मेद्धारी दिनेहरुमा सरला केसी, जीता बराल, डा तारा शाह, कृष्ण कुमारी पौडेल, तुलसादेवी अधिकारी, सिता कार्की, रिना श्रेष्ठ र मित्राकुमारी देवकोटा छन् ।
निर्वाचन समितिका अनुसार देशभर तोकिएका १४ वटा मतदान केन्द्रमा विहान ८ बजे देखि अपरान्ह ५ बजेसम्म भोट दिन सकिन्छ । समितिले बिराटनगर, सुनसरी धरान, जनकपुर, बीरगञ्ज, चितवन, काठमाडौँ, पोखरा, पाल्पा, बुटवलमा मतदान केन्द्र तोकेको छ ।
यस्तै नेपालगञ्ज, धनगढी, सुर्खेत, दाङ र धनकुटामा पनि मतदान केन्द्र तोकेको छ ।
काउन्सिलमा अनमी सहित दर्ता भएको नर्सको संख्या झण्डै ९० हजार पुगेको छ । तर नर्सिङ संघको सदस्यता लिएको नर्सको संख्या १२ हजार ४१ मात्रै छ । मतदानमा पनि संघको सदस्यता लिएका यिनै नर्सले मात्रै भोट दिन पाउने छन् ।
काउन्सिलमा जाने भएपनि यसपटकको निर्वाचनमा पनि पार्टीगत गुटवन्दी देखिएको छ । सत्तापक्ष नेकपा र प्रतिपक्ष कांग्रेस निकट नर्सहरु समूह बनाएर चुनावी दौडमा होमिएका छन् ।
नर्सिङ संघमा सधै जसो नेकपा निकट नर्सहरुको बश्चस्र्व देखिन्छ । तर यसपटक भने उम्मेद्धारीमा भएको गडबडीका कारण अर्को समूह हावी हुन पाएको जानकारहरु बताउँछन् । नेकपा निकटले डा तारा साह, कृष्णकुमारी पौडेल र तुलसा देवी अधिकारीलाई आधिकारिक उम्मेद्धार भनेको छ ।
उता कांग्रेस निकट समूहले सरला केसी, जीता बराल र मित्रा कुमारी देवकोटालाई आफ्नो आधिकारिक उम्मेद्धार भनेर भोटिङका लागि आवहान गर्दै आएको छ ।
यता नेकपा निकट मानिने सिता कार्की र रिना श्रेष्ठलाई बागी उम्मेद्धारको रुपमा औल्याइएको छ । तर उनीहरुले पनि राम्रै आउनसक्ने बताइएको छ । यसले यसपटकको चुनाव प्रतिस्पर्धात्मक हुने अडकल काटिएको छ ।
यस्तो छ भोलिको निर्वाचनको नमूना मतपत्र
चिकित्सक संघ निर्वाचन : पहिलो दिन खस्यो ४८ प्रतिशत भोट
चिकित्सक संघको निर्वाचन शुरु, विभिन्न मतदान केन्द्रको मोर्चा सम्हाल्दै उम्मेद्धार
नेपाल चिकित्सक संघको निर्वाचन भोलि देखि शुरु हुँदै, तयारी पुरा
स्वीकृत भयो स्वास्थ्य सचिव डा. पुष्पा चौधरीको राजिनामा
ज्यूँदै शिशुलाई अस्पतालले मृत घोषित गरेपछि ……
उच्च अदालत बिराटनगरले बीपी प्रतिष्ठानलाई भन्यो, ‘परीक्षा लिनु तर रिजल्ट ननिकाल्नु’
नर्सिङ काउन्सिलको सदस्यमा सानु तुलाधर र दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठ नियुक्त
अब एमडीआर टीबीका बिरामीले पनि नजिकैको स्वास्थ्य संस्थाबाट औषधी खान सक्ने
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरीले २० करोड घुस मागे : दुर्गा प्रसाईँ